Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game 6.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.2 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုဘိုင်းပေါ်တွင် # 1 FPS ပစ်ခတ်မှုစနိုက်ပါဂိမ်းမှကြိုဆိုပါ၏! ရန်သူနှင့်အတူစစ်တိုက်သွားနှင့် 3D စနိုက်ပါဂိမ်းရှင်ဘုရင်၏အ၌သင်တို့၏လက်ဖြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြ။
သေစေနိုင်သောစနိုက်ပါလက်နက်များ, စက်သေနတ်များနှင့်နက်ရှိုင်းသောရန်သူနယ်မြေအတွင်း၌လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးပြီးမြောက်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ရေးဂီယာနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လက်နက်! အခမဲ့ FPS အက်ရှင်ဂိမ်း၌ဤအားလုံးသည်ဤ nerf သေနတ်မဟုတ်!
သတ်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးကိုကယ်ဖို့သင့်ရဲ့တာဝန်ရဲ့ Bravo Shot ။ ဒါကဖုတ်ကောင်သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဘေးဥပဒ်ကိုဗိုလ်ခြေအပေါ်စစ်ဆင်နွဲ, အမဲလိုက်အကြမ်းဖက်သမားများကိုဆိုလိုသည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် pixel တိကျစွာနှင့်အတူတစ်ဦးချွန်ထက်သောသေနတ်သမား Call? ထိုအခါမိုဘိုင်းအပေါ်ထိပ်အခမဲ့စနိုက်ပါဂိမ်းထဲမှာစမ်းသပ်ဖို့သင့်ကျွမ်းကျင်မှုထားတော်မူ၏။
* ကျြောက 2400 Mission *
အထူးတပ်ဖွဲ့စစ်သားအဖြစ်သင်တစ်ဦးငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာ၏လမျး၌ရပ်နေသောရန်လိုတပ်ဖွဲ့များပစ်ခတ်, ကမ္ဘာအနှံ့လျှို့ဝှက်မစ်ရှင် navigate ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကို 3D သတ်ဖြတ်မှုဂိမ်းများကိုခစျြလြှငျသငျသညျဤအခစျြပါလိမ့်မယ်။
•တောတွင်းတောင်တန်းအတွက်ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်ရေး မှစ. , မြေထဲပင်လယ်ကျွန်းများပေါ်တွင် recon မစ်ရှင်မှ, သငျသညျတခုအထက်တန်းလွှာစနိုက်ပါအဖြစ်သေနတ်မှကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြိမ်းခြောက်မှုများကမ္ဘာကြီးကိုချခရီးသွားလာပါလိမ့်မယ်။
•စစ်တိုက်ရာဒီရေကိုဖွင့်ဖို့ယာဉ်များ Commandeer! တစ်ဦး jeep ၏နောက်ကျောအတွက်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြားအနီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံတိုက်ခိုက်ရေးဆင်းသွားပြီး, သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောရဟတ်ယာဉ်မစ်ရှင်အတွက်လေကြောင်းခရီးဖြင့်ရန်လိုခြိမ်းခြောက်မှုထွက်ယူပါ!
•အပြီးအစီးဖောက်ဖျက်မစ်ရှင်သိမ်းပိုက်ထားသောအဆောက်အဦးဝင်နှင့်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုသူတို့ကိုရှင်းလင်း! multiplayer ချေမှုန်းရေးဂိမ်းထဲမှာရန်သူတိုက်ခိုက်အပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝရှင်သန်နှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်ထက်ပိုမိုရန်သူများကိုရိုက်ကူး။
•အကောင်းဆုံးကိုစနိုက်ပါ vantage အချက်များတွေ့ပါနှင့် All-အရေးကြီးသောသတ် Shot ယူရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှတဆင့်ရွှေ့!
အခမဲ့ယခု app ကို Download လုပ်ပါနှင့်အသစ်ဒေသများနှင့်မစ်ရှင်နှင့်အတူပုံမှန် update ပျော်မွေ့။ ဒါဟာသင်၏ပျင်းမရကြလိမ့်မည်တဦးတည်း fps ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူကိုစစ်ပြိုင် * GO *
•သင့်ဒေါသအမျက်ကိုတိုက်ဖျက်မည်နှင့်ပျံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များပစ်ချ, Exo-Suit စစ်သားအဖြစ်, နောက်ဆုံးတော့ Zombies, Mechs, အကြီးစားဂန်းနား, ရန်သူ RPGs, Marksmen, Riflemen, ကွန်မန်ဗုံးကြဲနှင့်သူဌေးကသတ်ကြလော့။
* တိုက်ရိုက် PVP Sniper DUELS *
• PVP mode မှာတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်း Player ကိုအခနျးငယျ Player ကိုသေနတ်ပစ်ပွဲအခြားစနိုက်ပါဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစုံစမ်း!
•သင့်ပစ်မှတ်ကိုရှာပါ။ ရည်ရွယ်ထားယူပါ။ shoot!
* Alliance နဲ့ကရုဏာအဖွစျအပကျြ JOIN *
•သင်တစ်ယောက်တည်းတိုက်ပွဲဝင်မည်မဟုတ်ပါဒီအချိန်! အခြားအ shooters နှင့်အတူအင်အားကြီးမဟာမိတ် Build နှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပေးပါတယ်။
• Hunt ကများနှင့်ရန်သူလက်မှ Bounty စုဆောင်းပါ။
•အထူးသီးသန့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဖုတ်ကောင်များ၏အလုံးအရင်းထွက်ယူပါ။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကိုရပ်တန့်နှင့်အချို့သောဖုတ်ကောင်သတ်ဖြတ် start ရန်သင့်မဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။ နယူးဖုတ်ကောင်သေနတ်သမားဂိမ်း Modes သာ!
•သူငယ်ချင်းများအတွက်ပစ်မှတ်စက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်နှင့်ရန်သူများကိုရိုက်ကူးရန်သင့်အားကူညီ, multiplayer မစ်ရှင်၌သင်တို့ကို join လို့ရပါတယ်။
•အခြားအစနိုက်ပါနှင့်အတူနည်းဗျူဟာဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါရန်ဒီဂိမ်းထဲမှာအပြည့်အဝ Chat ကို function ကို။
* အကောက်ခွန် *
•သင့်ကိုယ်ပွား Customize နှင့်စစ်တိုက်ရာတွင်ကူညီရန်အခွင့်အရေးရ!
•ခမောက်, စစ်တပ်ယူနီဖောင်း, ခန္ဓာကိုယ်လက်နက်, မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး, facemasks, လက်အိတ်, ဖိနပ်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်အေးမြစစ်တပ်ဂီယာ, Unlock နှင့်တပ်ဆင်။
•တိုင်းအောင်ပွဲနှင့်အတူလတ်ဆတ်သတ် Shot ယခုအချိန်တွင်ရယူပါ! အခုဆိုရင်သင်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်အဆုံးစွန်ထိခိုက်၎င်း၏ပစ်မှတ်ဆီသို့ဦးတည် zooms အဖြစ်သတ် Shot ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ရ! ဒါကပရီမီယံစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာနှင့်အတူတစ်ဦးအခမဲ့ fps ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
* Google * SERVICES LEADERBOARD နှင့်အောင်မြင်မှုများ PLAY
•အပိုဆောင်းဆုနှင့်အောင်မြင်မှုများအနိုင်ရအပတ်စဉ် Quests အပေါ်ကိုယူ
အခမဲ့မိုဘိုင်းပေါ်တွင် # 1 FPS Sniper အညွန့် GAME PLAY!
© 2018 Hothead အားကစားပြိုင်ပွဲ Inc ကို, Hothead နှင့် Shot Kill အားလုံး rights reserved, အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Hothead အားကစားပြိုင်ပွဲ Inc ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 4.87k 7.87M
APK အေၾကာင္း Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.2
ထုတ်လုပ်သူ Hothead Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.hotheadgames.com/privacy-policy/
App Name: Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game
Release date: 2019-05-28 20:25:05
လက်မှတ် SHA1: A3:66:31:2C:6D:AE:8C:53:73:53:DB:A9:C0:07:D3:8E:F2:DB:5E:9F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Hothead Games
အဖွဲ့အစည်း (O): Hothead Games
Kill Shot Bravo: Free 3D Sniper Shooting Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ